अमेजन एलेक्सामा अब अमिताभ बच्चनको आवाज Canada Nepal
Sep 28 2020 | २०७७, आश्विन १२गते
२०७७, आश्विन १२गते
अदालतको वामदेवलाई तगारो, ओली–प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हतारो
वास्तुशास्त्रका यस्तो रहस्य जसले गरिबलाई पनि बनाइदिन्छ धनी
चर्चित गायक दुर्गेश थापाको चलचित्रमा इन्ट्री, अनमोल र सुहानासँग ‘ए मेरो हजुर ४’ खेल्दै
स्कुल खोल्न आएका सिन्धुलीका आठ शिक्षकमा देखियो कोरोना
अमेरिकामा चुनावी सरगर्मी : जो बाइडेन र आफ्नो ड्रेग टेष्ट गर्न डोनाल्ड ट्रम्पको माग
आहा ! कति आकर्षक र मनमोहक म्याग्दीको ‘झरना’
कोरोनाको असर : लोकप्रिय टिभी सिरियल ‘बालिका वधु’का निर्देशक ठेलामा तरकारी बेच्दै
डिएसपीसहित आठ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण
अमेजन एलेक्सामा अब अमिताभ बच्चनको आवाज
क्यानाडानेपाल डेस्क भाद्र २९ २०७७
काठमाडौँ। बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनको आवाजले भारतसहित विश्वका थुप्रै मुलुकाका दर्शकहरूलाई प्रभावित पारेको छ। अब अमेजन एलेक्सामा पनि बलिउडका 'बिग बी' अर्थात् अमिताभ आवाज सुन्न सकिने भएकाे छ ।
सोमबार कम्पनीले अमिताभ बच्चनसँग एउटा सम्झौता गरेको छ, जसमा ग्राहकहरूले अब अमिताभको आवाजमा विभिन्न चुट्किला, मौसम सम्बन्धी जानकारी, शायरी र अन्य थुप्रै प्रेरक भनाइहरू सुन्न पाउने भारतीय संचार माध्यमले जनाएको छ। अलेक्सा उपकरणहरूमा अमिताभको आवाज अर्को बर्षबाट सुन्न सकिने न्युज एजेन्सी आईएएनएसले जनाएको छ।
एजेन्सीकाअनुसार कम्पनीले प्राय: सबै पुस्ताले अमिताभ बच्चनको आवाजलाई निकै मनपराउँछन्। अभिनेता अमिताभको आवाजलाई एलेक्सामा सहभागी गर्नु ग्राहकहरूका लागि नयाँ अनुभव हुने बताएको छ। यसभन्दा अघि अमेरिकामा हलिउडका थुप्रै कलाकारहरुको आवाज प्रयोग भइसकेको छ।
यद्यपि, भारतमा अमिताभ अलेक्सा उपकरणमा आवाज दिन लागेका पहिलो बलिउड कलाकार हुन्। एलेक्सासँग संवाद गर्न प्रयोगकर्ताहरुले - हे एलेक्सा, से हाई टु अमिताभ बच्चन भन्नु पर्ने हुन्छ।
भाद्र २९, २०७७ सोमवार १७:५९:२८ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। यसले ठूल्ठूला व्यक्तिहरुलाई पनि करोडपतिबाट रोडपति बनाएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष असर भारतीय सिनेमा जगतमा पनि देखिन थालेको छ।
कोरोनाकै कारण चर्चित टेलिभिजन सिरियल बालिका वधुका निर्देशक रामवृक्ष गौर ठेलामा तरकारी बेच्न बाध्य भएका छन्। भारतीय संचार माध्यमहरुकाअनुसार रामवृक्षले आफ्नै गृह जिल्ला आजमगढमा परिवारको पेट पाल्न ठेलामा तरकारी बेच्न बाध्य भएका हुन्।
लकडाउनको बेला आफ्नो बालबच्चाको परीक्षा परेका बेला रामवृक्ष अहिले मुम्बई जान नपाएको संचार माध्यमहरुले जनाएको छ। परिवारको जिम्मेवारी बढेपछि उनी अहिले तरकारी बेचिरहेका छन् ।
लकडाउनको कारण यति बेला मुम्बईमा चलचित्रका कामहरु पनि ठप्प भएको छ। रामवृक्षले यशपाल शर्मा, मिलिन्द गुनाजी, राजपाल यादव, रणदीप हुडा, सुनील शेट्टी जस्ता ठूला कलाकारहरुसँग चलचित्रमा सहायक निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। रामवृक्षसँग सिनेमा जगतमा २२ वर्षको अनुभव रहेको छ।
आश्विन १२, २०७७ सोमवार ११:३१:२७ बजे : प्रकाशित
# बालिका वधु
# तरकारी बेच्दै
यस कारण ट्विंकल खन्नाले अक्षय कुमारसँग विवाह गरेकी थिइन्
काठमाडौँ । लोकप्रिय अभिनेता राजेश खन्नाकी जेठी छोरी हुन्, ट्विंकल खन्ना । उनको जन्म २९ डिसेम्बरको दिन १९७४ मा भएको थियो । पछिल्लो समय उनले आफूलाई चलचित्र जगतबाट टाडा राख्दै आएकी छिन् ।
थुप्रै सफल चलचित्रमा काम गरिसकेकी ट्विंकल हिजोआज लेखन जगतमा आफ्नो नाम स्थापित गर्न लागिरहेकी छिन्। उनले हालसम्म १४ वटा मात्र हिन्दी चलचित्रमा काम गरेकी हुन्।
थोरै चलचित्रमा काम गरे पनि उनी सधैँ चर्चामा रहने गरेकी छिन्। बरसात, बादशाह, जब प्यार किसी से होता है, इतिहास, मेला, लव के लिए कुछ भी करेगालगायत उनका सफल चलचित्रहरुमा गणना हुने गरेको छ।
सन् १९९५ मा हिन्दी फिल्म उद्योगमा प्रवेश गरेकी ट्विंकलले सन् २००१ मा बलिउडका अभिनेता अक्षयकुमारसँग लगनगाँठो गाँसेकी थिइन्। उनलाई कारण जोहरको ’कुछ कुछ होता है’ मा जुन रानी मुखर्जीले गरेको भूमिका अफर भएको थियो ।
तर उनले त्यस चलचित्रलाई अस्वीकार गरेपछि उक्त रोल रानी मुखर्जीले पाएकी थिइन्। उनको र अक्षयको विवाहबारे बोल्दै उनी भन्छिन्, ’मैले मेला फिल्म फ्लप भएपछि मात्र अक्षयकुमारसँग विवाह गरेकी हुँ’ ।
यसअघि उनीहरुको दुईपटक इन्गेजमेन्ट भइसकेको थियो। जब अक्षयले ट्विंकलसामु विवाहको प्रस्ताव राखे त्यतिबेला ट्विंकलको मेला भन्ने फिल्म आउने क्रममा थियो ।
साथै उनी विश्वस्थ थिइन् कि उक्त चलचित्रले सफलता हाँसिल गर्छ भन्ने । जसअनुरुप उनले अक्षयसँग एक प्रस्ताव राखेकी थिइन्। यदि चलचित्र असफल भएको खण्डमा मात्रै आफू वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिने शर्त खन्नाको थियो।
अन्ततः चलचित्रले खासै सफलता हाँसिल गर्न सकेन र उनी अक्षयसँग विवाह वन्धनमा वाँधिएकी हुन्।
आश्विन ११, २०७७ आइतवार १७:५१:५५ बजे : प्रकाशित
# ट्विंकल खन्ना
बलिउडमा ड्रग्स कनेक्सन, दीपिका पादुकोणेको मोबाइल जफत
एजेन्सी । ड्रग्स कनेक्सनले बलिउडमा धक्का लागेको छ । एक से एक कलाकार यो काण्डमा मुछिँदै गएका छन् । अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुत आत्महत्याले सबैभन्दा अप्ठेरो अवस्थामा बलिउडलाई पारेको छ ।
यसैक्रममा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो (एनसिबी) अभिनेत्री दीपिका पादुकोणेसहित तीन बलिउड अभिनेत्रीको फोन जफत गरेको छ। हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार एनसिबीले दीपिकासँगै सारा अलि खान तथा श्रद्धा कपुरको फोन जफत गरेको हो।
एनसिबीको नियन्त्रणमा रहेकी सुशान्तसिंहकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीले बयानका क्रममा अन्य अभिनेत्रीहरूको नाम लिएपछि दीपिकालगायतका अभिनेत्री लागुऔषधको प्रयोग तथा खरिद लगायतका विषयमा तानिएका हुन्।
एनसिबीले लागुपदार्थको प्रयोग र खरिद गरेको तथा सोका कारोबारीसँग सम्पर्क रहेको आशंकामा उनीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ।
आश्विन ११, २०७७ आइतवार १२:४८:११ बजे : प्रकाशित
# दीपिका पादुकोणे
बलिउडका चर्चित अभिनेत्रीहरू किन तानिए लागुऔषध सम्बन्धी अनुसन्धानमा
बीबीसी। बलिवुडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणसँग भारतको नार्कोटिक्स बोर्डले सोधपुछ गरेको छ। गत जुन महिनामा मृत्यु भएका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युको अनुसन्धान भइरहँदा त्यसैसँग सम्बन्धित भएर पादुकोणमाथि शनिवार बोर्डले सोधपुछ गरेको हो।
उक्त मुद्दामा बोर्डले दीपिका र अन्य तीन अभिनेत्रीसहित जम्मा ६ जनालाई बयानका लागि बोलाइसकेको छ। यसै महिनाको सुरुमा राजपूतकी केटीसाथी/प्रेमिका रिया चक्रवर्तीलाई पक्राउ गरिएको थियो।
उनीमाथि राजपूतका लागि लागुऔषध खरिद गरिदिने गरेको आरोप छ जुन उनले अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। राजपूतको मृत्यु बारेका समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा व्यापक रुपमा आएका छन् र घटनाबारे थुप्रै खालका अनुमानहरू गरिएका छन्। नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ले आफ्नो अनुसन्धान बृहत् बनाएको छ र उसले शनिवार पादुकोणसँग मुम्बइमा ६ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो।
यसैबीच, अन्य दुई अभिनेत्री सारा अलि खान र श्रद्धा कपुरलाई पनि एनसीबीकै अर्को कार्यालयमा छुट्टै सोधपुछ गरिएको थियो। अर्की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंहसँग शुक्रवार यसैगरी सोधपुछ गरिएको थियो। तर अधिकारीहरूले उनीहरूमाथि कुनै आरोप भने लगाएका छैनन्। गत जुन १४ तारिखमा ३४ वर्षीय राजपूत मुम्बइस्थित उनकै निवासमा मृत फेला परेका थिए र त्यतिबेला प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको बताएको थियो।
तर पछि उनका परिवारले प्रेमिका चक्रवर्तीविरुद्ध आत्महत्या गर्न उक्साएको लगायत अन्य अपराध गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। यी सबै आरोपलाई चक्रवर्तीले अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। अहिले यो मामिलालाई तीनवटा सङ्घीय निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
मामिला के हो?
नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ले अहिले दुईवटा छानबिन गरिरहेको छ। पहिलो रिया चक्रवर्ती, उनका भाइ र राजपूतका पूर्व व्यवस्थापकमाथिको अनुसन्धान पहिलो हो। तीनैजनालाई पक्राउ गरिएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अर्को अनुसन्धान भनेको बलिवुडमा लागुऔषधको व्यापक प्रयोग हुन्छ भन्ने दाबी बारे हो। अधिकारीहरूले उक्त अनुसन्धानबारे थोरै विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् जसका कारण सञ्चारमाध्यममा व्यापक अनुमानहरू गरिएका छन्।
अनुसन्धानको एउटा हिस्साको रुपमा एनसीबीका अधिकारीहरूले चक्रवर्तीको ह्वाट्सएप मेसेजहरूको अध्ययन गरिरहेका छन् जसमा उनले नार्कोटिक्सबारे छलफल गरेको आरोप छ।
अनुसन्धानमा दीपिका कसरी तानिइन्?
यो अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। नार्कोटिक्सका अधिकारीहरूका अनुसार ह्वाट्सएप मेसेजमा दीपिका र उनकी व्यवस्थापक पनि सहभागी छन्। त्यसैकारण उनीहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको हो। तर ती मेसेजहरूमा के छ भन्ने अझै खुलेको छैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले किन यो मामिलामा अभिनेत्रीहरूलाई मात्रै एनसीबीमा बोलाइएको र किन अभिनेतालाई नबोलाइएको भनेर प्रश्नहरू उठाएका छन्।
प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ?
टेलिभिजन च्यानलहरूको समाचार दिने आक्रामक तरिकालाई लिएर धेरैले आलोचना गरेका छन्। राजपूतको मृत्युयता सञ्चारमाध्यमले उनका थेरापिष्ट, साथीहरू, परिवार, सहकर्मीदेखि उनका पूर्व भान्सेको समेत अन्तर्वार्ता लिइसकेका छन्।
र, आधिकारिक जानकारी कम मात्रै सार्वजनिक भएका कारण समाचार च्यानलहरूले जति पनि सूचना चुहिन्छ त्यसको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न समय खर्चिएका छन्।
यसरी एउटा विषयमा धेरै समय खर्चिँदा अन्य सान्दर्भिक र गम्भीर मुद्दाहरूबाट आममानिसको ध्यान अन्यत्र मोडेको भन्दै थुप्रै मानिसहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। विश्वमै कोरोनाभाइरसका कारण सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या भारतमा दोस्रो नम्बरमा छ। अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ भने छिमेकी देश चीनसँगको सम्बन्ध पनि नराम्ररी बिग्रिएको छ।
आश्विन ११, २०७७ आइतवार ११:२६:१५ बजे : प्रकाशित
# लागुऔषध सम्बन्धी अनुसन्धान
काठमाडौँ। सुशान्त सिंह राजपुत प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ड्रग्सको विषय प्रवेश भएपछि अहिले बलिउडका धेरै कलाकारहरु यस केसमा मुछिएका छन् । ड्रग्स केसमा एकपछि अर्को गरी बलिउडका २५ कलाकारहरु मुछिएका छन् ।
यस केसमा भारतीय प्रहरी, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) लगायतले विभिन्न शैलीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसैबीच यस केसलाई लिएर शनिवार बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणसँग एनसीबीले बयान लिएको छ ।
बयानको क्रममा दीपिकाले ड्रग्स च्याट आफुले नै गरेको स्वीकार गरेकी छिन् । भारतिय मिडियाका अनुसार साढे ५ घण्टा लिइएको बयानमा दीपिकाले आफुहरुको वाट्सअप ग्रुप रहेको बताएकी छिन् । उनले उक्त वाट्सअप ग्रुपको आफु एडमिन रहेको र ड्रग्स सम्बन्धी कुराकानी हुने गरेको स्वीकार गरेकी छिन् ।
बयानमा उनले ड्रग्सको बिषयमा म्यानेजर करिष्मा प्रकाश, जया शाह लगायत बलिउडका कलाकारहरुको ग्रुपच्याट हुने गरेको बताएकी छिन् । भारतिय मिडियाका अनुसार सोधिएको धेरै प्रश्नमा दीपिकाले सिधा उत्तर नदिएको बताइएको छ ।
ड्रग्स केसमा सुशान्तकी प्रेमीका रिया चक्रवर्ती समेत छिन् । उनलाई यही केसमा एनसीबीले ८ सेप्टेम्बरमा पक्राउ गरेको थियो । अहिले उनी न्यायिक हिरासतमा छिन् ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १७:२७:३३ बजे : प्रकाशित
# बलिउड ड्रग्स प्रकरण
आफुले कहिल्यै ड्रग्स लिने नगरेको करण जौहरको भनाई
काठमाडौं - बलिउडमा लामो समयदेखि सुशान्त सिंह राजपुत प्रकरणको चर्चा चलिरहेको छ । यस प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा ड्रग्सको विषय प्रवेश भएपछि बलिउडका धेरै कलाकारहरु समस्यामा परेका छन् ।
ड्रग्स केसमा एकपछि अर्को गरी बलिउडका २५ कलाकारहरु मुछिएका छन् । यस केसमा भारतीय प्रहरी, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो ९एनसीबी० लगायतले विभिन्न शैलीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस केसमा एनसीबीले दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर लगायतका कलाकारसँग सोधपुछ गर्दैछ ।
भारतिय मिडियाका अनुसार यस केसमा एनसीबीले धर्मा प्रोडक्सनका कार्यकारी प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसादलाई पनि हिरासतमा राखेको छ । क्षितिजलाई एनसीबीले हिरासतमा लिएपछि अभिनेता करण जौहरले ड्रग्सबारे आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
करणको हालैको एक फिल्म क्षितिजले बताएका थिए । करणले अहिलेसम्म आफुले कहिल्यै ड्रग्स लिँने नगरेको बताएका छन् । जुलाई २८ २०१९ मा आफ्नो घरमा भएको पार्टीमा पनि ड्रग्सको प्रयोग नभएको उनले बताएका छन् ।
उनले आफुमाथि लगाइएको आरोप गलत भएको बताएका छन् । उनले भने , म न ड्रग्स लिन्छु, न त यसको प्रोमोट नै गर्छु । २०१९ मै मैले भनेको थिएँ, यो आरोप सबै गलत हो ।’
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १३:५१:५९ बजे : प्रकाशित